Ihe ngosi 25 dị mkpa na akwụkwọ ọgụgụ eserese | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Lee anyị wetara gị 25 ga-ahụ aha maka ndị na-akwado ụwa katuunuMa obu ihe eji eme ndi mmadu ma obu akwukwo.
25 nnukwu ọrụ ndị niile dị anyị mkpa, mana nke ahụ doro anya na ọ bụ ezigbo ndepụta iji bido, na-egosipụta ndị na-atọ ọchị nke ọtụtụ dị iche iche nke ahụ na-egosi anyị ụdị dị iche iche, ndị edemede na ndị nkwusa.
1 '300 '
3 'Oghere ojii'
5 'Asterix ndị Gaul'
6 'Ihe Omume nke Tintin'
7 'Calvin na Hobbes'
8 'Gị na Chineke dị nkwekọrịta'
9 'Alan Moore's Swamp Ihe'
10 'Daredevil: A mụrụ Ọzọ'
11 'Site na hel'
13 'Na-agba ịnyịnya ibu'
15 Maus. Akụkọ nke onye lanarịrị '
17 'Onye Nkwusa'
18 'Nloghachi nke Onye Ọchịchịrị'
19 'Onye Sandman'
20 'Obodo Mmehie'
23 'Ihe kachasị elu'
24 'V maka Vendetta'
25 'Ndị nche'
Aha mbu: '300 '
Ederede ederede: Frank Miller
Ndị na-ese foto: Frank Miller
Isi ederede: Dark Horse Comics
AKWILLKWỌ 300 MILLER & VARI ...
Anyị na-amalite nyocha a na otu n’ime ndị okike kachasị ewu ewu na-akpa ọchị, ọ bụkwa Fọkwa Miller mara ndị na-egwu egwuregwu ụwa yana ndị hụrụ ihe nkiri n'anya, ebe ọ bụ na onye na-ese ihe etinyewo aka na ọtụtụ mmegharị nke ọrụ nke aka ya, dị ka '300', otu n'ime ihe nkiri kachasị ama nke iri afọ gara aga nke Zack Snyder mere na fim na 2006 na nsonye nke Noam Murro na 2014.
Frank Miller na-agwa anyị n’ọrụ a ọgụ nke ndị dike Spartan 300 megide ndị agha Peasia nke Xerxes nke Mbụ na-edu, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu n’ọnụ ọgụgụ ndị chọrọ ịga n’ihu Gris. Akụkọ dabere na agha nke Thermopylae nke mere na 480 BC ma bụrụ onye isi okwu ya bụ Eze Sparta Leonidas nke Mbụ.
Aha mbu: 'Adolf ni tsugu'
Ederede ederede: Osamu Tezuka
Ndị na-ese foto: Osamu Tezuka
Isi ederede: Bungei shunju
Adolf (Manga: Ọbá akwụkwọ ...
Ọrụ na-esote iji gosipụta bụ 'Adolf', nke sitere na oge akụkọ akụkọ dị oke mkpa, na nke a Agha Ụwa nke Abụọ.
'Adolf' gbasoro akụkọ banyere mmadụ atọ nwere aha ahụ site na ịrị elu nke Nazism n'oge 1936 Olympic Games na Berlin ruo 1983. N'aka nke ọzọ, onye Juu Adolf Kamil na ezigbo enyi ya Adolf Kaufmann, bi na Japan na onye ọzọ Adolf Hitler. Ihe niile na-amalite na ọchụchọ maka akwụkwọ ụfọdụ dị oke mkpa iji kwatuo ndị Nazi site n'aka ndị Gestapo na Kempentai iji bibie ha, iji mechaa akụkọ ahụ, mgbe agha ahụ gasịrị, na steeti ọhụrụ nke Israel ebe Adolf Kamil na Adolf Kaufmann ga-ezute onwe ha ka ha hụrụ onwe ha n'akụkụ abụọ.
Aha mbu: 'Oghere ojii'
Ederede ederede: Charles na-ere ọkụ
Ndị na-ese foto: Charles na-ere ọkụ
Isi ederede: Kitchen ink dee
OGBU OGO, ỌR ... ...
N'etiti 90s, Charles Burns juru anyị anya site na usoro egwu na-atọ ọchị nke gosipụtara anyị n'ụzọ obi ọjọọma ọ bụ ihe siri ike bụ nzọụkwụ nke okenye y otú nghọtahie na-efu ndị na-eto eto, na nke a America. Ihe a niile nwere ụjọ nke dabere na ihe ịtụnanya.
'Black Hole' na-elekwasị anya na ndụ nke mmadụ anọ, Chris, Rob, Keith na Eliza, sitere na agbata obi Seattle na 70s, n'oge ọkọchị nke ọtụtụ ndị na-eto eto ebutewo ọrịa a na-ebute site ná mmekọahụ nke na-eme ka ha mepụta mmụba anụ ahụ.
Aha mbu: 'Akira'
Ederede ederede: Katsuhiro Otomo
Ndị na-ese foto: Katsuhiro Otomo
Isi ederede: Kodansha
Akira nke mbu 1
Ọrụ ndị ọzọ amaara na Japan bụ 'Akira', Ikekwe otu n'ime manga kacha mma na doro anya na ihe ndị kasị ama, karịsịa mgbe ya mmegharị na nnukwu ihuenyo n'ụdị animation na njedebe nke 80s site Katsuhiro Otomo onwe ya.
Onye na-atọ ọchị bụ edoziri na post-apocalyptic obodo Neo-Tokyo 2019, afọ iri atọ mgbe bọmbụ nuklia fọrọ nke nta ka ọ bibie ụwa, wee bute agha nuklia. Neo-Tokyo, megalopolis wuru na mkpọmkpọ ebe nke Tokyo oge ochieỌ bụ obodo mmegbu nwere ọtụtụ nsogbu, dịka enweghị ọrụ, ime ihe ike, ọgwụ ọjọọ na iyi ọha egwu. Enweghị afọ ojuju nke ụmụ amaala na-akpata ịrọ òtù okpukpe na otu ndị na-eyi ọha egwu iji kwalite akụkọ banyere «nwa ezi nwa», nke a na-ekwu na ọ debere «ike zuru oke», nke nwere ike ibute nlọghachi nke Japan.
'Asterix ndị Gaul'
Aha mbu: 'Asterix le gaulois'
Ederede ederede: René Goscinny, Albert Uderzo na Jean-Yves Ferry (n'oge dị iche iche)
Ndị na-ese foto: Albert Uderzo na Didier Conrad (n'oge dị iche iche)
Afọ: 1959-ugbu a
Isi ederede: Dargaud
Asterix na Gaul: Asterix na ...
Ihe ọchị na oreslọ ahịa akwụkwọ kemgbe ihe karịrị ọkara narị afọ, dị ka ọ dị na 'Asterix el Gaul', naanị n'ihi nke a, o kwesiri ohere a ma ama na ndepụta a. Na mgbakwunye anyị ga-egosipụtakwara ya dum na-ege ntị, ebe ọ bụ otu n'ime ọkacha mmasị nke ma ndị okenye ma ụmụaka.
“Anyị nọ n'afọ nke 50 tupu Jizọs Kraịst. Ndi Gaul nile ndi Rome no ya no occupied ha nile? Ọ bụghị! Obodo nke Gauls na-enweghị ike ịbelata ka na-eguzogide onye mwakpo ... » Site na mmeghe a, ihe ọ bụla nke 'Asterix the Gaul' na-amalite na ụzọ kachasị mma isi kọwaa atụmatụ nke egwuregwu a nke onye ọ bụla maraworị.
'Ihe Omume nke Tintin'
Aha mbu: 'Les aventures de Tintin et Milou'
Ederede ederede: Herge
Ndị na-ese foto: Herge
Isi ederede: Mgbakwunye du Petit Vingtième
C-Tintin na Tibet: ...
Ihe eserese ọzọ maka ọgbọ niile ka ọ pụta ìhè bụ 'Adventures nke Tintin'. Ọrụ onye Belgium Hergé bụ otu n'ime ihe ndị ewu ewu na akụkọ ntolite na nke kacha ochie, bido na 1929. Ma ndị na-eto eto ma ndị okenye na-enwe obi ụtọ 'The Adventures of Tintin' ndị buworo ya gaa ebe ndị dịpụrụ adịpụ.
Ihe nkiri a na-agagharị na Tintin, onye, ​​ya na nkịta ya Snowy, raara onwe ya nye dozie ihe omimi dị egwu, ọ na-abụkarị ihe metụtara ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ihe odide dika Captain Haddock, Prọfesọ Calculus, na ụmụnne Dupont na Dupond na-enyere ya aka n’ihe omume ndị a.
'Calvin na Hobbes'
Aha mbu: 'Calvin na Hobbes'
Ederede ederede: Bill Waterson
Ndị na-ese foto: Bill Waterson
Isi ederede: Andrews McMeel na-ekwusara
KALVIN & HOBBES ...
Ihe na-atọ ọchị dịkwa oke ọhụụ n'oge ụfọdụ, onye nwụrụ anwụ n'ime ya bụ 'Calvin na Hobbes', obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma na ụdị a. Bill Waterson wetara ọrụ a na ibe akwụkwọ akụkọ kwa ụbọchị maka afọ iri, n'etiti 1985 na 1995, na-egosi oke ọrụ nke ọrụ ahụ.
Ihe nkiri a na-atọ ọchị na-amalite ọnọdụ na Calvin na Hobbes dị ka ndị na-akwado ya, nke mbụ a niño nke-abua a juru afọ agụ, ma ọ bụ agu eze dabere na akara ahụ. Ma nke ahụ bụ 'Calvin na Hobbes' n'agbanyeghị ọdịdị nke ụmụaka, ọ dịghị ihe ọzọ si na eziokwu ọrụ ụbụrụ na-eduga na ntụgharị uche dị ukwuu nwere ọgụgụ dị iche iche.
'Gị na Chineke dị nkwekọrịta'
Aha mbu: 'Nkwekorita nke Chineke na Akụkọ Ego Ndị Ọzọ'
Ederede ederede: Ga Eisner
Ndị na-ese foto: Ga Eisner
Isi ederede: Akwụkwọ Baronet
Usoro nkwekọrịta ...
Na 'nkwekọrịta mụ na Chineke' na 1978 bịara ihe anyị maara taa dịka eserese eserese. Will Eisner bụ otu n'ime ndị na-ese ihe a ma ama na ngwakọta a nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya na melodrama bụ otu n'ime ọrụ ya kacha mma.
'The Street Singer', 'Super' na 'Cookalein' bụ aha akụkọ atọ a edoziri na 30s Manhattan, ebe gbara ọchịchịrị, unyi na ebe gbara ọchịchịrị mgbe Oké Ndakpọ Akụ na Ọgwụ
'Alan Moore's Swamp Ihe'
Aha mbu: 'Ihe Mmiri Ahụ'
Ederede ederede: Alan Moore
Ndị na-ese foto: ọtụtụ
Isi ederede: DC-akpa ọchị,
Ihe apiti nke ...
Obi abụọ adịghị ya na Alan Moore bụ otu n'ime ndị na-ese ihe kachasị mma n'oge anyị, enwere ọtụtụ ọrụ iji gosipụta, mana nke mbụ n'ime ha bụ 'Ihe apịtị ', usoro nke nwere otutu ndi edere ederede, mana nke ya na Alan Moore ruru ogo ya.
Onye na-ese ihe, onye okike nke nnukwu aha dị ka 'Ndị nche' ma ọ bụ 'V maka Vendetta', na-ewe otu n'ime ndị ama ama ama ama na ụwa nke ndị na-atọ ọchị mgbe nsogbu 20 gasịrị na-akọwapụta ọhụrụ na ọnụọgụgụ 21, na-egosi anyị mbido agwa emere site na flora.
'Daredevil: A mụrụ Ọzọ'
Aha mbu: 'Daredevil: A mụrụ Ọzọ'
Ndị na-ese foto: David mazzucchelli
Isi ederede: iju-akpa ọchị,
Daredevil. A mụrụ ọzọ
N'etiti otutu aha Marvel Comics, otutu n'ime ha di nma, mee ka ọrụ Frank Miller pụta ìhè na 'Daredevil: ornmụ Mmadụ Ọzọ', bụ onye werela otu n'ime obere mkpụrụedemede nke ụlọ obibi akwụkwọ n'elu.
Karen Page, Matthụnanya ochie Matt Murdock , gbanwere ihe nzuzo nzuzo nke Guardian Ekwensu maka ọgwụ ọgwụ. Ugbu a, Daredevil aghaghi inwe ike dika Kingpin na eti ya aka dị ka ọ dịtụbeghị mbụ.
'Site na hel'
Aha mbu: 'Site na Hel'
Ndị na-ese foto: Eddie ndubuisi
Isi ederede: Akwụkwọ ọhụrụ
Site na Hel (Chọpụta) ...
Ọrụ ọzọ pụtara ìhè nke nnukwu Alan Moore bụ 'Site na Hel', a arụsi ọrụ ike edepụtara banyere ọrụ igbu ọchụ Jack the Ripper na njedebe nke narị afọ XIX.
'Site na Hel' na-ekwu banyere ogbugbu ndị a na-akpọ Jack the Ripper, ogbu ọchụ nke a na-achọpụtabeghị onye ọ bụ, site na echiche nke akwụkwọ 'Jack the Ripper: The Solution Solution' nke Stephen Knight dere. Echere na ndị ọkachamara agaghị edozili ya, echiche a bụ na igbu ọchụ ahụ mere iji zoo ọmụmụ nke nwa nwoke na-ezighi ezi nke Prince Albert, Duke nke Clarence na nwa nwa nke Queen Victoria, na-egosi nkata Masonic.
Aha mbu: 'Akwụkwọ Jenesis'
Ederede ederede: Robert igwe
Ndị na-ese foto: Robert igwe
Isi ederede: WW Norton & Companylọ ọrụ
Akwụkwọ Robert Crumb nke ...
Robert Crumb bụ onye ọzọ dere ya, ọ bụ ezie na etolitela ọtụtụ ọrụ ya na Underground, ọ bara uru ịkọwa otu n'ime ọrụ ọhụụ ya, nke dị anya na ọrụ ya niile, 'Jenesis'. N'oge a, onye edemede ahụ ji obi ike jiri akwụkwọ nsọ mee ihe mmeghari kwesiri ntukwasi obi karie ka ichoro.
Robert Crumb na-eme mgbanwe kwesịrị ntụkwasị obi nke 'Jenesis' na ime ihe ike na mmekọahụ doro anya ọ bụ ezie na ọ dịghị ihe ọ bụla dị mma. Mgbanwe ziri ezi nke juru ndị Fans anya site na ịghara ịbụ ọchị dị ka ọtụtụ tụrụ anya ya.
'Na-agba ịnyịnya ibu'
Aha mbu: 'Na-agba ịnyịnya ibu'
Ederede ederede: Mark Millar
Ndị na-ese foto: John Romita Jr.
Isi ederede: Ihe ngosi Akara
Kick-Ass (Ihe osise ederede ...
Onye ọzọ kachasị ewu ewu na nka nke kwesiri ka ịnọ na ndepụta a bụ Mark Millar. Dị ka o mere na Frank Miller, Mark Millar aghọwo onye a ma ama na mpụga akwụkwọ akụkọ na-atọ ọchị maka mmegharị ya na nnukwu ihuenyo, 'Kick-Ass' bụ otu n'ime ọrụ ya nke gbanwere ihe nkiri ahụ na nnukwu ihe ịga nke ọma, n'agbanyeghị agbanyeghị echiche mbụ. Ọ bụ ezie na ihe nkiri a yiri ka a na-eche maka ndị nọ n'afọ iri na ụma, a na-eche ọchị ahụ maka ndị okenye na-ege ntị n'ihi ime ihe ike ya.
Akụkọ a gbara gburugburu Dave Lizewski, bụ onye New York dị afọ iri na ụma bụ onye, ​​nke sitere na ụwa nke ndị na-eme egwuregwu, na-achọ ịghọ dike. Iji mee nke a, ọ zụtara uwe na eBay iji yikwasị ya n'okpuru uwe ya ma gbalịa ịkpụzi site na imega ahụ ma mesịa gaa ịlụ ọgụ na mpụ.
Aha mbu: 'Onwuka'
Ederede ederede: Ọ bụghị ebe a
Ndị na-ese foto: Ọ bụghị ebe a
Isi ederede: Onye nchịkọta akụkọ Jorge Álvarez
Nchịkọta Mafalda: 11 ...
Ma ọ bụrụ na anyị ekwuola na mbụ 'Calvin na Hobbes', anyị enweghị ike ileghara mmetụta ha anya dịka 'Mafalda', ikekwe ọrụ ndị a kacha mara amara na ewu ewu na Spanish na akụkọ ntụrụndụ. Egwuregwu Comic nke Quino rụrụ ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri wee bido na 1964. N'agbanyeghị eziokwu ahụ, ọ karịala afọ iri anọ kemgbe Quino kwụsịrị ide akụkọ ọhụrụ gbasara agwa a, onye ọ bụla maara nwata nwaanyị a kpọrọ asị ofe.
Mafalda bụ isi ihe akụkọ a na-atọ ọchị na, n'agbanyeghị na enweghị nchekwube ya, na-anọchi anya ebumnuche na ebumnuche nke ụwa iji mee ka ụwa ka mma. Site na agwa a na okwu acid ya, Quino gosipụtara anyị ntụgharị uche nke nsogbu mmekọrịta ọha na eze na ụwa anyị na 60s, ihe ka dịkwa taa n'ọtụtụ ọnọdụ.
Maus. Akụkọ nke onye lanarịrị '
Aha mbu: Maus. Akụkọ Onye Dị Ndụ
Ederede ederede: Art spiegelman
Ndị na-ese foto: Art spiegelman
Zuru ezu MAUS, ...
Ọ bụrụ na akwụkwọ eserese nwere ike igosipụta egwu nke ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ, ya na 'Adolf', ọrụ Art Spiegelman 'Maus'. A masterpiece n'ụdị akuko ifo.
Site na oke dị ka nnọchite anya ndị Juu na nwamba dị ka ndị Nazi nke akụkọ ntolite, 'Maus' na-akọ banyere ihe egwu dị n'etiti 1930 na 1945 site na ezinụlọ ya site na oge abụọ, na Spiegelman gbara nna ya Vladek ajụjụ na afọ 1978 na 1979 na nke ọzọ anyị na-ahụ Vladek na-akọghachi ahụmahụ ya na onye mbụ.
Aha mbu: 'Persepolis'
Ederede ederede: Marjane satrapi
Ndị na-ese foto: Marjane satrapi
Isi ederede: Njikọ aka
Persepolis (Nduru ...
Oge ọzọ Marjane Satrapi dere 'Persepolis' pụtara. N'ime ya onye ode akwukwo nekwu akuko nke ya, site na nwata ya na Tehran nke mgbanwe nke alakụba rue oge ntorobịa ya siri ike na Europe.
'Persepolis' na-akọ akụkọ banyere Marjane Satrapi n'onwe ya onye tolitere na ọchịchị Alakụba ntọala, nke ga - eduga ya ịhapụ mba ya. Onye na-atọ ọchị malitere na ọhụụ nwata ya na 1979, mgbe ọ dị nanị afọ iri, nke bụ ihe mgbanwe mmekọrịta mmadụ na ndọrọndọrọ ọchịchị mgbe afọ iri nke ọchịchị Shah nke Peshia gachara, na-enye ọchịchị Alakụba Alakụba ụzọ.
Aha mbu: 'Onye Nkwusa'
Ederede ederede: Ugochukwu Onwuzulike
Ndị na-ese foto: Steve Dillon
Isi ederede: Vertigo (DC ọchị)
Nkwusa Mba 01 (nke ...
Otu n'ime egwuregwu kachasị mma nke ngwụsị narị afọ nke iri abụọ na otu nke kasị akpasu iwe bụ 'Nkwusa'. Ihe ọchị nke na-eweta ime ihe ike na ụwa nke okpukpe n'ụzọ obi ọjọọ.
Ọrụ Garth Ennis na-akọ akụkọ banyere onye ụkọchukwu nke jikọtara ya na mmụọ ozi dara ada na-enye ikpe ziri ezi maka United States mgbe ọ na-achọ Chineke n’onwe ya ịjụ ya maka nkọwa maka ịhapụ ihe okike ya, mmadụ.
'Nloghachi nke Onye Ọchịchịrị'
Aha mbu: 'Batman: Onye na-agba ọchịchịrị alọghachi'
Batman: Nlaghachi nke ...
Otu n'ime ihe odide ndị DC dị mkpa bụ Batman ma ọ bụrụ na anyị ga-egosipụta ọrụ site na agwa a ọ ga-abụ 'Nlaghachi nke Onye Ọchịchịrị', usoro nke Frank Miller kere na nke ahụ bụ Christopher Nolan mmụọ nsọ na-eweghachi omume ahụ na nnukwu ihuenyo.
Nke a na-atọ ọchị na-agbagha omume nke Batman / Bruce Wayne afọ iri mgbe ọ lara ezumike nká mgbe ọ ghọrọ onye a alcoụrụma nke na-etinye ndụ ya n'ihe ize ndụ na agbụrụ ụgbọ ala dị egwu nakwa na ọ laghachitala nro ojoo ya maka onwu nne na nna ya na ida ya n’ime olulu.
Aha mbu: 'Onye Sandman'
Ederede ederede: Neil Gaiman
Vertigo gbasara mkpokọta Mba
Amalitere dị ka usoro nke ndị na-eme egwuregwu na-egwu egwu ma mesịa banye n'ime ihe dị egwu, 'The Sandman' bụ otu n'ime ọrụ kachasị ewu ewu na ewu ewu nke mmalite 90s.
Ọrụ Neil Gaiman na-agbaso agwa nke Nrọ, ngosipụta anthropomorphic nke nrọ mmadụ, Nke bu ndi ezin’ulo nke mgbe ebighi ebi nke umunwanyi kuru, Onwu, Nrọ, Mbibi, umu ejima a choro na nwepu na Delirium. Nrọ, dị ka ogologo ndụ dịka eluigwe na ala n'onwe ya, ga-ekpebi ma ọ ga-agbanwe ma ọ bụ laa n'iyi ma ọ dị ka ọ meela mkpebi ya.
Aha mbu: 'Obodo Mmehie'
Eleghị anya ya masterpiece na ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọzọ kasị mma mara, anyi aghaghi igosiputa ihe omimi nke Frank Miller 'Sin City', nke Robert Rodríguez wetakwara na nnukwu ihuenyo ya na onye edemede ahụ n’onwe ya n’ụzọ kwesiri ntụkwasị obi, ọkachasị mma.
Frank Miller na-akọ na akwụkwọ akụkọ a ọtụtụ akụkọ na-eme na Basin City, obodo na-eme ihe ike na nke rụrụ arụ nke ha kpọrọ Sin City, Sin City na Bekee.
Aha mbu: Ahụekere
Ederede ederede: Charles M. Schultz
Ndị na-ese foto: Charles M. Schultz
Isi ederede: Njikọ Njikọ Otu
EGO. Obi ụtọ ...
Ihe ọzọ na-atọ ọchị iji gosipụta na nke ahụ bụkwa mmetụta maka 'Calvin na Hobbes', gịnị kpatara na ị gaghị ekwu ya maka 'Mafalda', bụ 'Snoopy'. O yighị ka ọ dị ka Quino, ma ọ bụ ụbụrụ dị ka nke Bill Waterson, mana akụkọ Schultz dịkwa oke. ha jikọtara nkatọ na ịkpa ọchị n'ụzọ ọgụgụ isi.
'Snoopy' bụ ihe egwuregwu na-atọ ọchị maka ndị nta akụkọ na-akọ ahụmahụ nke otu ụmụ akwụkwọ na ụbọchị ha, yana ndị isi okwu bụ Charlie Brown, na Spain Carlitos, na nkịta ya Snoopy.
Aha mbu: 'Mmụọ'
Ederede ederede: Ga Eisner na ndị ọzọ
Isi ederede: Ihe eji eme mma
Kachasị mma nke mmụọ nsọ ...
'Mmụọ' bụ otu n'ime ihe dị mkpa egwu nke 40s na ị ga - eme ya karịsịa gosipụta ọnụọgụ nke Will Eisner bịanyere aka na ya.
N'ihe dị nso n'ụdị ndị uwe ojii, ọ bụ ezie na ọdịnala, ihe ọchị na ọbụlagodi ihunanya, ihe nkiri a na-akọ Ihe Omume nke Masked Justice Denny Colt, onye na-alụ ọgụ megide mpụ n'okpuru moniker Mmụọ.
'Ihe kachasị elu'
Aha mbu: 'Ihe kachasị elu'
Ndị na-ese foto: Bryan ikedo
Isi ederede: Na-eju ọchị
The Ultimate (iju ...
Ihe ọzọ dị ịtụnanya na-atọ ọchị iji rịba ama bụ 'The Ultimates' nke Mark Millar, bụ onye weghachiri ndị ọbọ ahụ n'oge ha ya na usoro ohuru a.
Onye na-atọ ọchị bụ a oge a na kpochapụwo ndị na-abọ ọbọ, nke na-eme na ụwa ọzọ. Ya mere anyi huru ohuru Ultimate Nick Fury, Captain America, Iron Man, Thor, Wasp, Giant Man, Black Widow, Mercury and Scarlet Witch.
'V maka Vendetta'
Aha mbu: 'V maka Vendetta'
Ndị na-ese foto: David onyema
V maka Vendetta (Mbipụta ...
Site na Alan Moore anyị kwesịrị ịkọwapụta 'V maka Vendetta', a ukwuu graphic akwụkwọ nke ghọrọ ndị ọzọ na-ewu ewu ma ọ bụrụ na o kwere omume mgbe ihe nkiri mmegharị na kwenyesiri ike na ọha na eze na ya nnukwu nkatọ banyere mmekọrịta ọha na eze kwesịrị nnọọ ekwesị n'oge ahụ.
Akụkọ a ka agha mba nuklia lụrụ England were nke a ọchịchị aka ike a na-akpọ Norsefire nke na-achịkwa ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ site na iji mkpagbu na mgbasa echiche, yana teknụzụ teknụzụ dị ka igwefoto na igwe okwu. Otu onye mgbagha nke masịrị aha ya bụ V na-alụ ọgụ megide ọchịchị na-abụ onye ndu.
Aha mbu: 'Ndị nche'
Ndị na-ese foto: Dave Gibbons na John Higgins
Ndị nche (mbipụta ...
Iji mechie ụdị anyị nwere 'Ndị nche', ihe ọchị ọtụtụ na-anwa anwa ikwu na ọ bụ nke kasị mma n'akụkọ ihe mere eme. Obi abụọ adịghị ya na 'ndị nche', yana ọrụ ndị ọzọ nke oge ahụ, kara akara tupu na mgbe ụwa katuunu, na nke ya site n'igosi ndị na-akwado ya dị ka antiheroes karịa ndị dike ochie.
'Ndị nche' na-egosi anyị ụwa nke ọzọ etinyere na dịtụ iche 80, nke ndị dike dị ka ndị na-akwado akụkọ ahụ. Oge mgbanwe ahụ bịara na 1938 na mgbanwe kachasị dị mkpa bụ Richard Nixon merie na n'ihi Agha Vietnam.
Ndị a bụ aha 25 nke isi ihe nke ụwa nke ndị na-atọ ọchị, o doro anya na enwere ọtụtụ ndị ọzọ, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọrọ anyị ndị ị ga-agụ, egbula oge ịgwa anyị site na nkọwa. A na-ahazi ọrụ 25 ndị ​​a n'usoro mkpụrụedemede yabụ na ọ dịghị ebumnuche nke ịkọwapụta otu karịa nke ọzọ, mana ọ bụrụ na ịchọrọ na ụfọdụ ka ndị ọzọ mma, egbula oge igosi ya na nkọwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Egwuregwu » 25 ga-ahụ ndị na-atọ ọchị na akwụkwọ akụkọ
Onye bụ onye nọ na fim 'Otu igbu onwe'